အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: သစ်တစ်ပင်ရဲ့ လေးရာသီ
29 Responses to “သစ်တစ်ပင်ရဲ့ လေးရာသီ”
ဒါကြောင့် ဆန္ဒစောပြီး ကောက်ချက်ချတာတွေ မချလိုက်ဖို့
ချော ရေ..ဒီပုံပြင်လေးက ကျွန်တော်တို့ ကို သတိပေးလိုက်တဲ့.. သဘောနဲ့ မှတ်သားစရာ ပုံပြင်လေးပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက်ကို တစ်ခါနှစ်ခါပဲ တွေ့ဖူးကြုံဖူးတာနဲ့ သူ့ရဲ့ စရိုက်အမှန် ဖြစ်နိုင်မယ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို စဥ်းစားစရာရစေပါတယ်..
ကော်နက်ရှင် က ဆိုဒ်တွေဝင်ရတာ အရမ်းလေးနေတာ နဲ့ စာတွေ ကို လာမဖတ်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာဗျ.. အခုတောင် တခြားဆိုင်က နေ ၀င်လာလို့..ဒီလို ရေးလို့ ရသွားတာ..
လူတစ်ယောက်ကို လတ်တလောအမြင်၊ သူ့ရဲ့ လတ်တလော အပြုအမူတို့နဲ့ မဆုံးဖြတ်ဘဲ ရေရှည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တာက အမှန်ဆုံး ...ဆိုတာကို ထောက်ခံသွားပါတယ် မချောရေ...။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပေါင်းကြည့်မှ သိနိုင်တယ်ဆို သလိုပေါ့ နော် မမ..
မမn N ကိုင်ရာ ...အဲလေ ..မမချောရေ
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ..ဒါက လူ နဲ့ တူတဲ့ လူတိုင်း မှာ ရှိတဲ့ သဘောတရားလေးတွေ ပဲ နော် ။
ရေရှည်ဆက်ဆံ ကြည့်မှ သူ့ ရဲ့စိတ်သဘောထားအစစ်အမှန်ကို သိရမှာ ။
ဒါပေမဲ့ ဟိုလူကြီးတွေကတော့ လေးရာသီ မပြောနဲ့ ရာသီ ၄၀၀ ပြောင်းသွားလည်း ပြည်သူ့ သဘောထား အစစ်အမှန်ကို မသိတတ်ကြသေးဘူး ....း))) အံ့ ရော ပဲ .. ( မဆိုင်ပေမဲ့လိုရာ ဆွဲ တွေး မိသွားပါတယ် .. )
ကျနော့် အစ်မ တစ်ယောက်ကို ပေးဖတ်အုံးမှ
သူက သူထင်တာကိုပဲ ကောက်ချက်ဆွဲ တတ်လွန်းလို့။
ကျွန်မလဲ တစ်ရာသီ ထဲကိုပဲ ကြည့်နေမိလားဆိုပြီး တွေးနေမိတယ်...
မှန်တယ်အစ်မရေ။ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရေရှည်ပေါင်းကြည့်ပြီး မှ ဆုံးဖြတ်သင့်တာပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လည်း ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ပြန်သတိပေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်လေး က ပြောနေတယ်း)
အခြေနေအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲ ပုံမှန်ကိုင်စွဲထားလို့မရတဲ့ အကြောင်းလေးကို ဖတ်ပြီးတွေးတော ဆင်ခြင်သွားပါ၏။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် (ချိုကျ)
ကိုယ့်ကိုယ် ကို ပြု ပြင် ဖို့ သေချာ မှတ် သွား ပါတယ်ဗျာ။
သတိပြု စရာ ပို့စ် ကောင်းပါ။
ဟုတ်ပါတယ်.. လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာ.. လတ်တလော အပြုအမူတစ်ခုတည်းနဲ့ မကြည့်သင့်ပါဘူး..
ဟုတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းသိပြီးလိုက်နာဖို့ခက်တဲ့ အရာတခုပါ။
စာကောင်းပေမွန်တွေကို လာဖတ်သွားပါတယ် ချောရေ။
အချိန်ကာလ နဲ့ ဗဟုသုတ လိုသွားတာပါ။
အရာ တစ်ခုကို သေချာ မြင်ရဖို့ ဆို ဘယ်လောက်များ အချိန်ယူ စောင့်ကြည့်ရမလဲ။
အရမ်းကောင်းတဲ. ပိုစ်.လေးပါ.. မချောစုရေ..
very nice post!!! I like this post very much.
အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ထဲက ပုံပြင်လေးကို ခံစားသွားပါတယ်... လူသားတိုင်း ဒီပုံပြင်လိုအမြင်တွေတူနေရင် သိပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်...
စီဘောက်ကနေ အော်ချင်ပေမယ့် သည်ပေ့ခ်ျကန်နော့ဘီဒစ်စ်ပလေးတဲ့.... စီဘောက်တွေမှာအော်ချင်ပေမယ့် အဲဒီလိုတွေပဲ ကြုံနေရတယ် မမရယ်....
အခုလို အပြုသဘောဆန်တဲ့ ပုံပြင်လေးတွေ မျှဝေပေးတဲ့ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ကို ကျေးဇူးပါ...
အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ကိုရောက်တိုင်း စိတ်တွေ စိမ်းလန်းသွားတတ်တာ အစိမ်းရောငလွင်ပြင်ရဲ့ ဝိသေသတစ်ခုလားဟင်!
ချောရဲ့ ကွန်မန့်ကို သဘောကျတယ် .... တခါတခါ ညီမလေးတို့က ကိုယ့်အထင်နဲ့လွဲတတ်ကြတယ်လေ ... ။ သတိထားရမယ် ။
အရမ်း ကောင်းတဲ့ စာလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ ...
မြန်မာပြည်သဘောနဲ့ ပြောရင်တော့ ဆောင်းဥတုမှာ အရွက်ဝေ...
မိုးရာသီမှာတော့ အမြစ်ကနေ ကျွတ်ထွက်သွားမှာလေ...
(ပုံမှန်= လဖက်ရည် မဟုတ်ပါကြောင်း...........း))
အိုး အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်...ဒါဟာလောကကြီးမှာ လူတွေ အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်သုံးသတ် တာကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင် ကိုယ်က အများလုပ်တိုင်း လိုက်မလုပ်သင့်တာတွေထောက်ပြ ရေးသားထားတဲ့ မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်ပါ...Keep it up sis :D